Ruzhinji ruzivo nezve kurima mbanje | MyWeedSeeds.com
Kurima mbanje mumba kana panze
Kusarudza pakati pembeu nemakoni
Kurima mbanje inomera kubva mumbeu
Kudzidza kukura uye kutumbuka chirimwa chembanje
Kushandisa mwenje yekukura kana marambi
Kusarudza pakati pevhu uye hydroponics
Kusarudza mishonga nefetiraiza
Kusarudza mapoto nemidziyo inokura
Kuongorora iyo pH nhanho
Kucheka kana kuchekerera yako mbanje zvirimwa
mbanje dzemukati dzichikura /
General ruzivo nezve kurima mbanje
Kana uchitarisa mafomu matatu akajairika ekurima mbanje, iwe unowana mukati, kunze uye greenhouse ichikura. Ndeipi nzira yaunosarudza ingangobikira pasi kune rudzii rwemamiriro ekunze nzvimbo yako ine uye zvinotaurwa nemitemo yako yemunharaunda nezve kurima mbanje. Nyika zhinji dzinogovana pfungwa dzakafanana pakuva kana kurima mbanje, saka isu tichaisa pfungwa pakurima mbanje miti mumba kuti ikubatsire kunzvenga mhedzisiro. Miti yembanje yakanakisa inouya kubva kumbeu dzembanje dzakanakisa, saka tarisa shopu yedu kana usati watova nembeu dzaunoda kutanga chirimwa chako. Tarisa mhando dzakasiyana dzaunonakidzwa nekuona dzichikura kusvika iwe uchikwanisa kuidzidzira, kunyatsoteerera kureba kwenguva ichatora zvirimwa zvako kukura uye kutumbuka.
Iwe uchazoda kugadzirira imba yako usati watanga kurima mbanje mbichana kuitira kuti iwe usave nekumhanyisa-nevavakidzani vako. Iwe uchazoda kuve nechokwadi chekuti nzvimbo yako iri kukura haizobudise mwenje kana chero hwema kuti udzivise chero kukosheswa kusiri madikanwa. Zvirinani iwe unoda nzvimbo isingakure isingakure iyo inogona zvakare kuitwa kunhuhwirira-chiratidzo uye isina mvura. Mafirita eCarbon anobatsira nekunhuhwirira uye mafeni anotendera mweya mutsva kutenderera uchitenderera zvirimwa. Iine kamuri inoda kuve isina mwenje uye zvakare isingabudise chero mwenje, girazi repurasitiki dema rakakora zvakakwana kuti risaratidze mwenje chero nhungamiro inogona kunge iri yako yakanaka mari. Kutenga machira epamusoro-soro chinhu chinogona kushandiswazve kwemakore mazhinji, saka mari yacho yese inogona kunge iri shoma mushure menguva. Nechiedza chakawanda sekusvirwa nembanje, unogona kuwedzera kubatsirwa kwekupfeka kana ukachiisa nepurasitiki chena, penda nzvimbo iri kukura chena kana kushandisa aruminiyamu pepa pamadziro kuratidza mwenje kumashure kwembanje dzako.
Mumwechete mai chirimwa chinoshandiswa kuumbiridza mitsva uye midiki michero nekushandisa akacheka akatorwa kubva kune iwo wechikadzi chirimwa zvakananga. Iwe uchazoda kusarudza amai chirimwa chaive neyakagwinya, simba uye negoho rakanaka kuitira kuti mbeu dzako nyowani nyowani dzikupe izvo zvakafanana zvinogona kuitika. Vamwe varimi vembanje vanoona kuumbana kwakaoma uye ivo vasingakwanise kubereka zvakafanana, saka vanosarudza mbeu. Iwe uchazoda kuve nechokwadi chebhanga rembeu raunosarudza rine mukurumbira wakasimba nekuti haazi ese mabheji embeu akagadzirwa akaenzana, kana zvigadzirwa zvawo.
Iwe unozoda kutanga kanokwana kuita kakapetwa kaviri mbeu zhinji sezvo paine nzvimbo yezvirimwa zvekupedzisira nekuti izvo zvinomera zvinozove zvechikadzi kana zvehurume, uye iwe urikutsvaga chete kune chakasimba kwazvo chemiti yechikadzi. Kuti umere mbeu yembanje, unogona kuisa mbeu pakati pemashiti emvura emapepa kana iwe unogona kuisa mbeu dzakananga muchimiro chako chiri kukura. Maitiro ese ari maviri anoda mazuva mashoma ekuti kumera kutange, asi kuchengetedza mbeu dzakanyorova uye dzakafukidzwa nekuputirwa kwepurasitiki kunobatsira kuti chiitiko chiitwe nekukurumidza. Paunongoona kutanga kwembeu ichibuda, kuisa mbesa nyowani pasi pechiedza kunovabatsira kusimuka. Miti yacho inofanira kugara 4-8 "(10-20 cm) kure nechiedza, ichigadzirisa sezvo mbanje dzinotanga kukura. Maitiro aya anofanirwa kusanganisira maawa gumi nemasere kusvika gumi nemasere echiedza pazuva uye kazhinji anotora kusvika kumavhiki maviri kuti agadzire. michero, zvichienderana nemhando ipi yawasarudza kurima. Kana mbanje dzako dzasvika pamuti we 18-24 "(3-4 cm), tendera ivhu kuti riome dzimwe usati wapa zvirimwa mvura yakawanda. Izvi zvinokurudzira kukura kwemidzi. Varimi vatsva vanowanzo nyanyisa-kudiridza mbanje yavo, saka ita shuwa kungodiridza kana zvichidikanwa.
Zvakafanana nemiti yemumba, kutumbuka uye kukura zvinoenderana nekuwanda kwechiedza (kana kushomeka kwayo) chirimwa chimwe nechimwe chinowana. Panyaya yemiti yembanje, mwenje unotaurira genetics yemuti iyo chitubu chakabuda uye izvo zvinoita kuti ikure-nguva. Sezvakangoita muchisikigo, gare gare munguva yekukura mwenje unodzikira, uchiudza zvemukati magene echirimwa kuti atumbuke nekusunungurwa kwehomoni phtyochrome. Izvi zvinobvumira kuti simiti itarise zvakanyanya pamaruva. Kufananidza iyi patani ndiyo poindi yekugadzirisa mwenje munzvimbo inokura.
Kana iwe uchida gohwo rakakura, saka unofanirwa kupa chikuru mwenje. Girobhu rebhuruu rimwechete rinoshandira kurima dzimwe mbesa, asi kuti utumbuke unoda rimwe girobhu mazana mana kumatemba mana auri kuedza kusvika maruva. Chiedza chakasimba chauinacho, gohwo riri nani rauchazowana, saka varimi vazhinji vane hunyanzvi vanoshandisa ma400 watt sodium mababu panzvimbo. Imba iyo chena kubva kumusoro kusvika pasi ichabatsira kuratidza mwenje wakanyanya kudzoka kumiti yako yembanje. Kuona kuti nzvimbo dzako dzekutengesera dzinokwanisa kubata dhizaini inodiwa kuti nzvimbo inokura igadzire iri rimwe danho rakakosha kugadzirira imba yako yekukura. Nzira yakanaka yekuyedza izvi ndeyekuti kana iwe uchikwanisa kushandisa mwenje, vharumu uye wako wekuwachisa usina kana fuse inoputika. Kana iwe uri kushandisa iyo 600 watt girobhu, ingango dhonza anosvika matanhatu amps ane 600 volt sevhisi, saka iwe unoda kuve nechokwadi kuti izvi hazvizokonzere kunetsa mumba mako. Kana iwe ukashandisa girobhu iri uye rikatanga moto mukati memawaya ako, yako inishuwarenzi kambani inozopedzisira isisazokunyorera cheki kwauri yekuvhara kugadzirisa mushure meichi chiitiko chisiri pamutemo. Isu tinowanzo dzivirira ma incandescent bulbs nekuda kwekusaita kwavo, uye kuenda ne fluorescent bulbs nekuda kwekuwanikwa kwavo nemutengo. Iwe unofanirwa kuisa angangoita makumi maviri nemashanu mawati mune yega yega square tsoka (6 sq. Cm) yenzvimbo yekukura, iine akawanda akasiyana shades emuchena machubhu aunogona kuwana kubatsira kutevedzera zuva. Metal Halide (MH) mababu akakura mukuzivikanwa munguva pfupi yapfuura nevarimi nekuda kwechiedza chavo chena chakajeka chinodyarwa nembanje zhinji kubva pairi. Iwe unenge uine zvirimwa zvakasvibirira zvine simba kupfuura izvo zvakakura pasi peye fluorescent mwenje system. Kushandisa mwenje yesodium kunopa orenji kana yakajeka yeyero mwenje, yakafanana nechiedza chemugwagwa, icho varimi vazhinji vanoshandisa kuita maruva maitiro.
Kana iwe usina basa nebasa rakasviba, tinokurudzira ivhu nekuda kwekuwedzera kwekuravira uko goho rako richava naro. Hydroponics yakachena zvakanyanya, asi chirimwa chako chose chinogona kukanganiswa nekukanganisa kuri nyore kana maviri. Iwe uchaona kuti kuravira kunowanzo siya chimwe chinhu chinodiwa kana uchishandisa hydroponics, asi varimi vane ruzivo vanogona kuwana kunaka kwakanaka neiyi nzira. Iwe zvakare unofanirwa kugara uchifunga kuti haugone kufambisa iyo hydroponics system kwaunogona kufambisa hari kana zvikafanira. Varimi vazhinji vembanje varima vakabatwa nekuda kwekutarisa kwavo hydroponic system kutanga kuvuza, zvichikonzera kutariswa kukwezva zviitwa zvavo.
Zvirimwa zvembanje zvinoda makemikari gumi nemana ekukura zvine hutano. Vatatu vavo vanoonekwa se macro-zvinovaka muviri: phosphorus (P), potasium (K) uye nitrogen (N). Zvirimwa zvembanje zvinoda huwandu hwakawanda hweizvi zvinovaka muviri uye zvakanyorwa pane akawanda mafetiraiza seNPK. Sekondari zvinovaka muviri, zvakadai sesarufa (S), magnesium (Mg) uye calcium (Ca), zvinoda kuuya sechipiri zvakanyanya kuwanda, uye zvidiki-muviri zvinoda kuuya chetatu. Izvi zvinovaka muviri izinc (Zn), manganese (Mn), iron (Fe), cobalt (Co), molybdenum (Mo), chlorine (Cl), boron (B) nemhangura (Cu). Iwe ungangoona chete macro-zvinovaka muviri zvakanyorwa pamapakeji nekuda kweminiti huwandu hwunodiwa hwehumwe hutano. Paunenge uchitarisa pakukura, iwe uchazoda iyo nitrogen-inorema fetiraiza, kunge musanganiswa we14 / 20/10, uye kana uchitarisa pakurima, iwe uchazoda phosphorus-inorema fetiraiza, kunge musanganiswa we10 / 5/20. Iwe unoda kuve nechokwadi chekuti usanyanya-kuisa fetiraiza yako mbanje michero nekuti izvi zvinogona kukanganisa chibage chose. Kumonera mashizha chiratidzo chinowanzoonekwa kuti fetereza yakawandisa iri kushandiswa. Zvese zvigadzirwa zvinogadzirwa kuti mbanje irime ichikura nekuti kuputa goho rako ndicho chinangwa chako chikuru. Dzivisa mafetiraiza ayo anofanirwa kunge ari ekudyara mbanje sezvo iwo ari mashoma kupfuura fetiraiza yemadomasi iyo mumwe munhu akaisa chitambi chitsva uye ndokuwedzera mutengo weti. Manyowa ndiyo fetereza yakanakisa yaungangowana. Dzivisa kushandisa emulsion yehove, zvisinei, kunze kwekunge uine simba remhepo filtration system nekuda kwekunhuwa.
Ramba uchifunga mupfungwa kuti okisijeni yakawanda zvakadii midzi yemiti wembanje inoda kana iwe uchibatanidza yako inokura svikiro. Iwe uchazoda kuve nechokwadi chekuti pane imwe perlite kana jecha mumusanganiswa wako, uchipa iyo inodiwa oxygen uye wakabatirira kune yakawanda mvura kuti zvirimwa zvirege kupera mvura. Iwe zvakare unodawo kuve nechokwadi chekuti hari dzako dzakakura zvakakwana kune hombe michero, iyo ichave iine makuru midzi mipira. Iyo hari dzinoda maburi madiki padyo nepazasi padzo kuitira kuti mvura yakawandisa igone kubuda nekuti mvura yakawandisa inokuvadza midzi, inogona kuuraya zvirimwa zvako. Kushandisa hari dzevhu dzinofanira kudzivirirwa zvakare nekuda kwetsika yavo yehyp-evaporation.
Izvo hazvina basa kuti ndeipi rudzi rwePH mita yaunoshandisa, nekuti vese vanoita zvakafanana zviito zvekutanga. Iwe unozongoda kuve nechokwadi kuti iwe unowana iyo chaiyoiyo mita iwe yaunogona kuwana. Kune mapepa anoshandiswa kamwe chete, kana emamita emagetsi anokwanisa kushandiswa kakawanda. Imwe neimwe inokuratidza panosvika ivhu rako nemvura pachikero cheacidic (zero) kusvika kune zvakakosha (gumi nemana), zvine mwero kuve pH yechinomwe. Iyo yemagetsi mita ndeyekudyara kwakanaka kana iwe ukaronga kurima mbanje inodyara kwenguva refu-kuchengetedza mari pane yekutsiva matanda. Probe inongopinda muvhu rako uye unowana kuverenga, pane kuti umirire mitsetse, ichikuchengetera nguva. Kana mhinduro yako yakanyanya kukosha, kana alkaline, unogona kudzosera chikero pasi uchishandisa nitric acid, vitamini C, vhiniga kana sulfuric acid. Kana mhinduro yako yakanyanya kuva acidic, lime, madota ehuni kana bicarbonate yesoda inounza iwo mazinga kuti adzokere. Shandisa madonhwe mashoma panguva yekugadzirisa iyo pH uye kuyera mushure menguva yakapihwa mhinduro yekubatanidza. Chinhu chekupedzisira iwe chaunoda kuti chikonzere makemikari kuzvipisa iwe kana yako mbanje zvirimwa.
Kugadzikana ndiyo kiyi yekurima mbanje yakasimba. Kunyangwe hazvo simiti ichigona kutsungirira kupisa kwakanyanya, inononoka kukura kwese kana kutumbuka. Kuchengeta chirimwa chako chakakomberedza 68 ° F (20 ° C) kwakanakira nekuti kukura kunozomira pazasi pe57 ° F (14 ° C) uye zviputi nefungi zvinozova dambudziko kana kamuri iri pamusoro pe75 ° F (24 ° C). Imba yako yekukura ichave inodziya kana iwe ukashandisa iwo mazana matanhatu watt (kana akakwirira) mababu, kunyanya mukati memwedzi inopisa yezhizha, saka unogona kuda fan yemukamuri. Munguva inotonhora yemwedzi yechando, iwe ungangoda hita kana magetsi achidzimwa husiku kudzivirira kuti mbesa dzako dziwedzere kutonhora. Kana iwe ukaronga kushandisa mafeni, ita shuwa kuti ivo vanongopuruzira zvinyoro pamiti yako kuitira kuti irege kumanikidza iwo muti mukugadzira iyo gobvu rakadzika pawaizoda rinotarisa pakukura kuri nani uye kutumbuka.
Iwe uchazoda kuyedza uye chengetedza yako yekukura imba pane ingangoita 50% humidity kuitira kuti mbanje dzako zvirimwa zvirege kuenda kune zvakanyanyisa. Kuchengeta hunyoro hwako kuongororwa ndiyo nzira yakanakisa yekudzivirira hunyoro hwakanyanya, kuumba nzvimbo yekuberekesa yezvipembenene nezvirwere zvezvirimwa.
Kana zvirimwa zvako zvasvika pamasentimita mashoma kukwirira, uye zvirimwa zvako zvine maseti matatu emashizha ari kukura, unofanirwa kucheka mashizha maviri epamusoro achibvumira kuti mbanje ipatsanuke kuita matavi maviri. Izvi zvinogadzira iyo bushier chirimwa, kunyanya kana ichidzokororwa nenguva yekudzoreredza pakati pega chega chekucheka. Kana zvikaitwa nemazvo, izvi zvinogona kubatsira kusimudzira goho rako zvakanyanya. Nekudaro, kana ikasaitwa nemazvo, izvi zvinogona kukuvadza chirimwa, zvichinonokera kukura kuti zviongorore kugadziridzwa kwemiti.
Kana mbeu yako yembanje yasvika pakukwirira kwaunoda, unogona kubhenekera kutenderera kwemaawa gumi nemaviri echiedza chakajeka uye maawa gumi nemaviri erima rakachena. Izvi zvinotanga maruva maitiro mukati memiti yako mbanje, zvichikusvitsa nhanho imwe padhuze nekukohwa. Kamwe bvudzi diki pane yako mbanje buds yashanduka ingangoita 12% brown (kana tsvuku kana orenji, zvinoenderana nezvakasiyana), ndiyo nguva yekukohwa goho rako.
Kubvisa mashizha nemuti wako wembanje uchingogara muhari kunowanzoita kuti maitiro acho ave nyore. Ive neshuwa yekubvisa chero akanongedzwa mashizha ayo ari kunamira kunze kwako mbanje buds sezvo iwo anowanzoita kuti iyo tiraira ive nehasha uye yakapinza, ichikuvadza huro yako kana iwe uchiputa. Mushure mekubviswa kwezvikamu zvakashata zvemuti uye zvakasara zvine hutsi-zvinosara, turika mbanje dzako dzakatwasanudzwa pasi nekudzivirira kwakanaka uye nemhepo yekufema kuitira kuti hapana makonzo kana zvimwe zvipembenene zvingakanganisa chirimwa chako. Makonzo anoda kumedza mbanje nembeu, saka ramba wakatarisisa goho rako. Tevedzera kutungamirwa kwezvirimwa zvako zvembanje panguva yekurapa, uchipa nguva yakawandisa sezvazvinodiwa pakurapa kwakakodzera, kuti usazoguma uine chirimwa chinopinza, asi pachinzvimbo iwe une utsi hwekudenga hwaunoda. Heater dzinofanirwa kudzivirirwa panguva ino kuitira kuti usazokanganisa hunhu hwechirimwa chako.